Madaxwayne Trump "Meesha kama saarayno tilaabo militari oo ka dhan ah Venezuela - BBC Somali
Madaxwayne Trump "Meesha kama saarayno tilaabo militari oo ka dhan ah Venezuela
12 Agoosto 2017
Image caption Nicolas Maduro
Madaxwayne Donald Trump ayaa sheegay in uusan meesha ka saarayn tillaabo militari marka ay timaado in lala tacaalo dhibatada dalka Venezuela ka jirta.
Madaxwaynaha oo ka jawaabayay su'aalo ay magaalada New York, ku waydiinayeen saxafiyiinta ayaa waxa uu sheegay in dadka Venezuela ay dhibaato iyo dhimasho la kulmayaan islamarkana ay Maraykanka u furan yihiin tillaabooyiin badan oo ay ka mid tahay tilaabo militari haddii loo baahdo.
Wasiirka warfaafinta Venezuela,Ernesto Villegas,ayaa sheegay in ay tahay hanjabaadii ugu halisanayd ee ebed dalkiisa loo jeediyo.
Wasiirka gaashaandhiga Venezuela,Vladimir Padrino ayaa dhankiisa hadalka Mr Trump ku tilmaamay ficil waali ah iyo awood xagjirnimo.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxwayne Nicolas Maduro uu codsaday in wadahadal dhanka talefoonka ah la yeesho Mr Trump,balse uu ku faraxsanaan lahaa in uu la hadlo Maduro marka dimuqraadiyda Venezuela dib loo soo celiyo.
Dowladda Maraykanka ayaa dhawaan cunaqabatayn ku soo rogtay madaxwayne Maduro, waxa ayna ku tilmaameen in uu yahay kaligiitaliye.
Dalka Venezuela waxaa mudooyiinkii ugu danbeeyay ka socday dibad baxyo looga soo horjeedo dowladda madaxwayne Nicolas Maduro.